Banyere US - Xishun Plastics Factory
Ibé akwụkwọ ACRYLIC
Mpempe akwụkwọ CAST CLEAR ACRYLIC
Mpempe akwụkwọ ACrylic dị ọcha EXTRUDED
Mpempe akwụkwọ CAST COLOR ACRYLIC
Ibé akwụkwọ ACRYLIC agbawapụtara
Mpempe akwụkwọ ACrylic oyi kpọnwụrụ
Mpempe akwụkwọ mgbochi scratch acrylic
Mpempe akwụkwọ ACRYLIC na-emegide ọkụ
Mpempe akwụkwọ ACRYLIC DIFFUSER
Ibé akwụkwọ ACRYLIC enyo
Mpempe akwụkwọ ịchọ mma Acrylic
Ibé akwụkwọ MARBLE ACRYLIC
Mpempe akwụkwọ GLITTER ACRYLIC
Ibé akwụkwọ ACRYLIC ndị ọzọ
Ngwa ahịa ahaziri ahazi Acrylic
Ụlọ ọrụ Xishun Plastics
Xishun Plastics e hiwere na 1996, bụ mmepụta, ahịa, nhazi acrylic mpempe akwụkwọ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ niile. Xishun plastic nwere extrusion ọkwa efere mmepụta osisi, nkedo ọkwa efere mmepụta osisi na acrylic usoro nhazi osisi, ya ika GARY, rere nke ọma na ihe karịrị 50 mba na mpaghara, na aghọwo ihe dị mkpa enterprise na anụ ụlọ PMMA efere mmepụta. Ogo ya na ọrụ ire ere ka ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ahụ toro ma mara ya. Xishun Plastics na-ewebata teknụzụ a pụrụ ịdabere na ya na ahụmịhe njikwa mmepụta n'ụlọ na mba ọzọ. Ngwaahịa ndị bụ isi bụ mpempe akwụkwọ PMMA (ọkwa extrusion, ọkwa nkedo), MMA monomer na acrylic handicrafts, nke enwere ike imepụta efere dị iche iche na agba dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Mgbe afọ nke mmepe, anyị factory na-aga n'ihu na oge, rube isi na Enterprise management nzube nke "sara mbara na miri, mmeri-mmeri development", ike oru ike, na-agbalịsi maka nlanarị site àgwà, na-agbalịsi ike mmepe site sayensị na nkà na ụzụ, na na-agba mbọ maka mmepe site na talent. Mee ka ụlọ ọrụ anyị nọgide na-enwe ọganihu dị mma nke mmepe na asọmpi ahịa. Ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-abawanye kwa afọ, uru akụ na ụba na-abawanye kwa afọ.
Mkpa gị, nghọta anyị! Anyị na-ekwe nkwa: "na-atụle ọrụ, àgwà ngwaahịa, mmasị price", mgbe niile na-agbasosi "àgwà mbụ, ahịa mbụ" nzube, iji nye gị ezi ngwaahịa.
Ịgbasawanye ahịa bụ ihe mgbaru ọsọ anyị, anyị ga-emeziwanye ọkwa nke ọrụ, gbalịsie ike ịmepụta uru ngwaahịa, anyị dị njikere ịkwalite nkwurịta okwu, imekọ ihe ọnụ n'eziokwu, mmepe nkịtị, ma jikọta aka iji mepụta ọdịnihu dị mma.
N'inwe ahụmịhe karịa afọ 24, XISHUN acrylic emeriela aha ọma maka nka nka na ezigbo ngwaahịa. Ọ bụrụ na enwere ohere na anyị ga-arụkọ ọrụ n'ọdịnihu, XISHUN ga-enwe obi ike ịbụ onye mmekọ ntụkwasị obi gị!
No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, Shunde district, obodo Foshan, Guangdong Province
Dị n'elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere 18 nke abalị
adreesị: No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, Shunde district, obodo Foshan, Guangdong Province
Ekwentị: +86 0757 27886999